छवि–शिल्पाको सम्बन्धमा पूर्णविरामको संकेत, शिल्पा भन्छिन्,‘डिभोर्स दिन्छु, छविको घर फर्किने छैन’! « Salleri Khabar
छवि–शिल्पाको सम्बन्धमा पूर्णविरामको संकेत, शिल्पा भन्छिन्,‘डिभोर्स दिन्छु, छविको घर फर्किने छैन’!
नेपाली सिने नगरीमा यतिबेला निर्माता छबिराज ओझा र नायिका शिल्पा पोखरेलबीचको बिवादले तातेको छ ।छवि ओझा र शिल्पा पोखरेलको घरेलु झगडा सुल्झिनुको साटो दिनदिनै बल्झिँदै गएको छ । गत बिहीबार प्रहरीको रोहबरमा दुबै जना मिलेका थिए तर त्यो मिल्ती त्यहाँबाट निस्कने बित्तिकै भताभुंग भएको छ । युट्युबमा दुबै एकअर्कालाई गलत साबित गर्न लागिपरेका छन् ।
शिल्पाले छविका पुराना घाउ पनि कोट्याइरहेकी छिन्, छवि तिनको बचाउमा लागेका छन् । युट्युबरले दुबैको झगडाको राम्रैसँग फाइदा लिइरहेका छन् । दुबैले एक अर्कालाई गलत साबित गर्ने प्रयास गरिरहँदा छवि ओझाले सोमबार मध्यरातमा शिल्पालाई सम्बोधन गर्दै स्ट्याटस लेखेर आफ्नो अदालतमा आए न्याय पाउने जिकिर गरेका छन् ।
मध्यरातमा लेखेको स्ट्याटसमा निर्माता ओझाले शिल्पासँग तीन दिनदेखि भेट्न खोज्दा पनि समय नदिएको र आफू शिल्पासँग टेबलमा बसेर छलफल गर्न तयार भएको बताएका छन् । उनले लेखेका छन्:
मैले ५२ बर्षको उमेरमा ३ जना श्रीमती सङ सम्बन्ध बिच्छेद भईसकेपछि तपाईं सङ चाहिँ जिन्दगि बिताउन सक्छु होला भनेर जिन्दगिका सब थोक कम्प्रमाइज गरेर माया गरेर बिहे गरेको श्रीमती हो तपाईं l छातिमा हात राखेर आज एक्छिनलाई आफैलाई नढाटी सम्झनुस तपाइले लगाएका कति आरोपहरु सत्य छन ? यदि तपाईं पनि आफुलाइ सच्याएर अझै मेरो श्रीमती, तपाइले बिहे गर्ने बेलामा आस्वासन दिलाए जस्तै मेरो बुढेसकालको सहारा बनेर बस्न सक्नुहुन्छ भने, म पनि मेरा कमि कमजोरीहरु सच्याएर गान्धीबादी भएर बस्न सक्छु । अरुको कुरा नसुन्नुस, आउनुस हाम्रो घरको ढोका सधै तपाईंको लागि खुल्ला छ । हैन र यदि तपाइ साच्चै म सङ बस्न सक्नु हुन्न भने पनि एक पटक म सङै आएर टेबलमा कुरा गर्नुस । मेरो ईतिहास पल्टाएर हेर्नुस आज सम्म मैले कुनै पनि श्रीमतिलाई अन्यायमा पारेको छैन । तपाइलाइ पनि पार्दिन । मैले बिगत ३ दिन देखि तपाइलाइ सम्पर्क गरेर भेट्न खोज्दा पनि तपाइलाई अब मेरो वकिलले भेट्छ भन्नू भयो । म फेरि पनि भन्दैछु, सन्सारको कुनै पनि अदालतमा जानू पर्दैन । छबी ओझाको अदालतमा सिधै आउनुस । तपाइले न्याय पाउनु हुन्छ ।
३ बर्ष अघि बिवाह गरे पनि मिडियामा नखुलेका छबि र शिल्पाबीचको सम्बन्ध अहिले आएर भने छताछुल्ल भएको छ । शिल्पामाथि छबिले चरम घरेलु हिंसा गरेपछि त्यो सहन गर्न नसकेपछि शिल्पाले प्रहरी नै गुहार्नु प¥यो । शिल्पाले आफुले बिवाह गरेको केही महिनामा नै छबिको असलीरुप देखेको तर आफनो घर परिवारको इज्जतको लागि र श्रीमान भएको नाताले पनि सहँदै आएको तर पछिल्लो पटक भने घाँटी थिचेर मार्न खोजेपछि उनले प्रहरी गुहारेकी हुन् । शिल्पाले छबिले आफुलाई नराम्रो बाटोमा नहिड्दा पनि शंका गर्ने , अश्लिल गालीगलौज गर्ने , कुटपिट गर्ने जस्ता हिंसा गरेको बताईन् ।
शिल्पाको उजुरीपछि प्रहरी कार्यालयमा उनीहरुबीच कुराकानी पनि भएको थियो । जहाँ उनले शिल्पासंग माफी मागेका थिए । तर छबिले माफी मागेपनि शिल्पा भने खुसी देखिएकी थिईनन् । नत छबिले शिल्पालाई घर लान पहल गरे नत शिल्पा नै खुसी देखिईन् । छबिले शिल्पालाई आफनो परिपक्ता देखाउँदै नत फोन गरे नत घर फर्कानउे पहल गरे । बरु उल्टै फेसबुकबाट समेत छबिले आफुलाई ब्लक गरेको शिल्पाले बताईन् । उनले ३ बर्षदेखि सहदै आएको तर अब नसक्ने भन्दै बाँकी कुरा कानुनी प्रक्रियामा जाने बताएकी थिईन् । अन्तत: छवि–शिल्पाको सम्बन्धमा पूर्णविरामको संकेत देखिएको छ ।
तर, शिल्पाले छबिसँग बस्न नसक्ने भन्दै डिभोर्स फाइल गरेको केही अन्तर्वार्तामा उल्लेख गरेकी छिन् । तर, छवि र शिल्पाको विवाहमा २० बर्षभन्दा बढीको उमेर अन्तर रहेको र त्यति धेरै अन्तरको विवाह अनमेल विवाह अन्तर्गत पर्ने भएकाले शिल्पाको डिभोर्सको निवेदनलाई कानुनले कसरी ब्याख्या गर्ला चासोका साथ हेरिएको छ ।
तेजासको फस्ट लुक सार्वजनिक
चलचित्र तेजासमा इन्डियन एयर फोर्सका बहादुर पाइलटहरुको कथा समेटिएको छ ।
एबी इन्टरनेसनलले चलचित्र बोर्न टु डान्स बनाउने
एजेन्सी । अमन तामाङको निर्देशन र एबी इन्टरनेसनलको निर्माणमा नेपाली कथानक चलचित्र बोर्न टु डान्स
‘सेन्टिभाइरस’को दोस्रो गीत ‘आफ्नो पार्टी जिताइदे’ सार्वजनिक(भिडियोमा)
बक्स अफिसमा खस्कियो लभ आजकल
इम्तियाज अलिकै सन् २००९ मा रिलिज भएको लभ आजकल अझै पनि दर्शकहरुको मनमा ताजा छ